Kuratidza zvinyorwa neelebheri pole
Haje nadhi Jizeri, Rybnice
The musha Haje nad Jizerou iri muna Semily District muna Liberec mudunhu, pakati kubatana pakati pemataundi Semily uye Jilemnice, pamahombekombe poRwizi Jizera (Grove pamahombekombe rweruboshwe, chimwe chikamu kurudyi).
690 vagari vanogara pano. Pakupedzisira, kune 1. 3. 2001, musha akanga agara yakashuma 637 vagari, 302 mumusha Lower Sytová, 154 mumusha dziva mumusha Loukov 125 uye 67 mumusha Haje nad Jizerou. Pari musha dzinokwana ndakabatikana zvachose 188 127 dzimba uye yezororo anamapako.
Kutanga kutaurwa kwekutanga kwemusha kunobva ku1636.
Mukare, musha wakadanwa neimwe chikamu chePond.
Kubva 1960 musha une zvikamu zvinotevera:
Vonje nad JizerouDolní SytováLoukovFishing